Ogaden News Agency (ONA) – Madaxa Gudiga Yurub oo Ka Hor Yimid Badaxbanaanida Catalonia.
Madaxa Gudiga Yurub oo Ka Hor Yimid Badaxbanaanida Catalonia.
Posted by ONA Admin	/ October 14, 2017
Madaxa guddiga Yurub Jean-Claude Juncker ayaa sheegay in uu san taageersanayn madaxbannaanida Catalonia, isaga oo ka baqaya in qolyo kalana ku daydaan.
Mr. Juncker oo arday kula hadlayay Luxembourg ayaa ka digay in arrintaasi ay sababi karto gobol aad u qasan oo Midawga Yurub ay ku adkaandoonto in uu maamulo. Spain ayaa qasan tan iyo markii dawlad goboleedka Catalonia ay qabatay afti lagu murmay kawdii bishan Oktoobar
Maxkamadda ugu sarraysa dalka Spain ayaa aftidaas waxba kama jiraan ka soo qaaday, dadka u soo baxay codayntaasna waxay ahaayeen 43%. Ku dhawaad 90% dadkii codeeyay waxay taageereen madaxbannaani, sida ay sheegeen saraakiisha Catalonia.
Arrintaas ayaa horseeday in hogaamiyaha Catalonia Carles Puigdemont uu si aan rasmi ahayn ugu dhawaaqo madaxbannaani Talaadadii. Wuxuu markii dambana sheegay in aan arrinta madaxbannaanida dhaqangalinteeda la billaabin todobaadyo si wadahadallada Madrid wakhti loo siiyo.
Ra’iisulwasaaraha Spain, Mariano Rajoy oo arrintaas ka jawaabaya ayaa shan maalmood u qabtay hogaamiyaha Catalonia si uu u caddeeyo in uu madaxbannaani ku dhawaaqay iyo in kale. Haddii Puigdemont uu Isniinta caddeeyo in uu madaxbannaani ku dhawaaqay, waxaa la siin doonaa saddex maalmood oo dheeri ah si uu uga laabto ku dhawaaqitaankaas.
Juncker oo Jimcihii ka hadlay jaamacadda Luxembourg University ayaa Rajoj ugu baaqay in uu xaaladda xakameeyo, ka dib markii uu xaaladda ku tilmaamay halistii ugu waynayd ee dimuqraadiyadda Spain soo wajahda muddo 40 sano ah.
Midawga Yurub ayaa caddeeyay in haddii Catalonia ay ka go’do Spain aysan ka sii mid ahaan doonin Midawga Yurub. Waxaa kale oo Midawgu caddeeyay in arrinta madaxbannaanida ay u taallo Spain. Si kastaba ha ahaatee Juncker ayaan qarinin aragtidiisa khaaska ah.
“Haddii aan ogolaano in Catalonia ay madaxbannaanaato, inkastoo aysan shaqadanada ahayn, kuwo kale ayaa ku dayan, arrintaasna ma jeclaysanayo, Ma jeclaan doono in aan 15 sano ka dib arko Midawga Yurub oo 90 dal ka kooban.” ayuu yidhi madaxa gudiga Yurub.